Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zikhupha inkxalabo kwizicwangciso zokuhamba kwihlabathi lanamhlanje
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba kunye neehotele » Iindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zikhupha inkxalabo kwizicwangciso zokuhamba kwihlabathi lanamhlanje
Iindaba zaseAntigua kunye neBarbuda • Iindaba zeBahamas Breaking • Iindaba zeBarbados Breaking • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Caribbean • Iindaba zeCuracao Breaking News • Iindaba zeGrenada Breaking • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • Iindaba zeLuxury • iindaba • Ukwakha kwakhona • Resorts • Iindaba eziNgcwele zikaSanta Lucia • Tourism • Iindlela zokuHamba | Iingcebiso Zohambo • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba ezahlukeneyo
Ahh ... ziiSandals Resorts!
Abahambi bayangxama nakancinci, bakulungele ukwenza izicwangciso zabo zeholide, ngaphandle kwento eyenzekayo emhlabeni ngoku. Ngethamsanqa, iiSandals Resorts zinendlela yokwenza ezi zicwangciso ngokuzithemba kwaye ngaphandle kokukhathazeka malunga nokuba yintoni enokwenzeka okanye engenzeki kwixesha elizayo.
Iindwendwe kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiSandals Resorts zinokushiya ngasemva iingxaki zazo xa zibhukisha iiholide zazo kwaye ziphuphe kakhulu.
KwiiNdawo zokutyela iiSandals kunye noLwandle, umgaqo-nkqubo "weNcwadi enokuzithemba" ubonelela ngoxolo lwengqondo, nokuba kwenzeka ntoni emhlabeni.
Kude kube ngumhla wokuhamba, imbadada ngokuzithemba iindwendwe zazo zigqunyiwe kwaye zikhuselwe.
Kwiisandali, iindwendwe ziyakhuthazwa ukuba ziphuphe zikhulu kwaye zicwangcisele iholide yazo yexesha elizayo ngokuzithemba okupheleleyo kunye nokunciphisa uxinzelelo lokuzinikela. Incwadi yeSandals ngokuzithemba ivumela iindwendwe ukuba zibuyiselwe imali eyi-100% xa kurhoxisiwe ngaphambi kweentsuku ezingama-31 okanye ngaphezulu ngaphambi kokumka.
Kwakhona, okwexeshana, Iindwendwe zeembadada banokubanakho ukurhoxisa uhambo lwabo ukuya kumhla wokuhamba kwaye bafumane isohlwayo sokurhoxiswa komhlaba esibuyiselwe kwiziqinisekiso zokuHamba eziKhethekileyo.
Yintoni isiBonelelo esiKhuselekileyo sokuHanjiswa kweeholide?
IziBonelelo zoKhuselo lokuCinywa kwenxalenye yomhlaba esemhlabeni yeholide inikezela ngembuyekezo eyi-100% ukuba irhoxisiwe ubuncinci iintsuku ezingama-31 okanye nangaphezulu, okanye irhoxisiwe ukuya kumhla wokuhamba, ifumana isatifikethi sohambo kuhambo lwexesha elizayo, kubhukisho olutsha olwenziwe ngoku Nge-31 ka-Agasti ka-2021. Esi sibonelelo sinikezelwa ngeeNdawo eziKhethekileyo kwaye ayisosibonelelo se-Inshurensi.
Iindwendwe ezibhukisha ngoku kude kube nge-31 ka-Agasti ka-2021, zinezibonelelo ezongeziweyo zokwazi ukuba zingarhoxisa nangasiphi na isizathu ngaphandle kwemihla yoMnyama njengoko kuchaziwe apha ngezantsi. Akukho bude bude bokuhlala obuyimfuneko.
Iindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kunye namagumbi egumbi
Ilula into ukuyichaza, kuba oku kugubungela zonke iiSandals kunye neeLwandle Resorts. Ngokubhekisele kumagumbi egumbi, uninzi lwazo lukwagutyungelwe ngaphandle kwee-Over-The Bungalows zaManzi kunye ne-Over-The Villas zaManzi kwiiSandals Royal Caribbean, kwiSandals South Coast, kwiSandals Grande St. Lucian.
Oktobha 6-Agasti 31, 2021 *
Oktobha 6-Disemba 31, 2022 *
* Imihla yokuCima uMnyama yokuSebenza -
Disemba 27, 2020 - Januwari 3, 2021
NgoFebruwari 13 - 19, 2021
Matshi 15-Epreli 11, 2021
NgoNovemba 20, 2021-Novemba 26, 2021
UDisemba 18, 2021-Disemba 31, 2021
NgoFebruwari 19, 2022 - ngoFebruwari 25, 2022
Ngomhla ka-12 Matshi 2022-Matshi 26, 2022
Epreli 10, 2022-Epreli 24, 2022
NgoNovemba 19, 2022-Novemba 25, 2022
UDisemba 21, 2022-Disemba 31, 2022
Fumana ezinye iinkcukacha apha.
Iihotele eziMnandi zaseMelika ngexesha leGolide ...
Ngubani uDonald Wright, i-VP entsha yeAlaska Airlines?